Sense, နှိုးစက်နာရီရှငျဘုရငျ | Gadget သတင်း
Juan Colilla | | နေအိမ်အလိုအလျောက်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ယေဘုယျ, နေအိမ်, နည်းပညာ
ကျနော်တို့«ဟုခေါ်တွင်နိုင်ရာ၌ရှိကြ၏ရွှေရာသီ»နည်းပညာအတွက်၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုနောက်ထပ်ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်စေသည့်စမတ်ကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများ၊ bladeless ပန်ကာများ၊ ဖန်သားပြင်များနှင့်အတူတူပင်နည်းပညာနှင့်အနုပညာတို့မှတော်လှန်ရေးထုတ်ကုန်များကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင် "ရိုးရှင်းစွာဖြင့်ဆောင်ပုဒ်ကိုသယ်ဆောင်သောထုတ်ကုန်များသည်စွမ်းအား" ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒီနေ့ဒီအနုပညာလက်ရာတစ်ခုကိုသင့်ကိုပြချင်တယ်။ လှပမှုအပြင်အပြင်အဆင်လည်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ ငါနှိုးစက်နာရီ / အိပ်မော်နီတာအကြောင်းပြောနေတာ။ အာရုံ.
Hello လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ် တစ် ဦး Kickstarter ကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ၎င်းသည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုသာမကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်နာရီတစ်ခုလုံးကိုပါကတိက ၀ တ်ပြုထားသောနေရာတွင်၎င်းလုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်ပြုလုပ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုကတိပေးခဲ့သည်။ “ ငါတို့ဘဝရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကိုအိပ်မောကျနေတယ်၊ ​​ဒီအချိန်ဟာငါတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနားယူမှုကကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကျန်းမာတဲ့ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မနိုင်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်။ ”
တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့သည့်အနေဖြင့်မြေပြင်မှအဆင်သင့်ထွက်ခွာပြီးနောက်သူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ “ Sense ဖြင့်သင်အိပ်နေတဲ့အချိန်အားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးသင်သတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်လည်းသိနိုင်မှာပါ။
သွေးဆောင်, မထင်ဘူးလား ကောင်းပြီ၊ ဒါကကျွန်တော့်အတွက်အဲဒီပုံပဲ၊ ငါကသူ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဲရင့်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ငါပြောနိုင်ပါပြီ အိမ်မှာငါ့ရဲ့အသိရှိတယ် (ရှည်လျားသောစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်, ကဒီဇိုင်း, စမ်းသပ်ပြီးထုတ်လုပ်နှင့်တင်ပို့နေစဉ်) ။
Sense သည်သင်ရရှိပြီးသည့်နောက်ဘာတွေယူဆောင်လာသည်ကိုသိချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ, ငါ့ကြည့်ရှုရန် 10 မိနစ်ယူပါ လုပ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဗွီဒီယိုများကိုကျော်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဤစက်၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုပြောပါမည်။
သင်မေးသောမေးခွန်းမှာအဖြေသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကြောင့် Sense သည်အာရုံခံနိုင်သည့်ကိရိယာများပါရှိသည် မော်နီတာ သင်၏ညဘက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သင်လုပ်သောပတ်ဝန်းကျင်နှစ်ခုလုံးကိုရှင်းပြပါရစေ။
Sense သည်အဓိက gadget ပါဝင်သည်။အာရုံ»နှင့်လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာ«အိပ်ဆေး«။ အဓိက gadget သည် monitor အဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်၊ ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ၊ စိုထိုင်းမှု၊ အပူချိန်၊ အသံ (မိုက်ခရိုဖုန်း)၊ စပီကာ၊ အလင်းအာရုံခံနှင့်ဖုန်မှုန့်နှင့်ဝတ်မှုန်များအတွက်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ Sleep Pill သည် Sense ၏ extension နှင့်တူသည်။ ဤသေးငယ်သောဆေးတောင့်သည် accelerometer နှင့် gyroscope ကဲ့သို့ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာများပါ ၀ င်သည်။ ဤဆေးတောင့်သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအနီးကပ်တိုင်းတာနိုင်စေရန် Sense သည်သူတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်း သင့်အခန်း၏အချက်အလက်။
ထို့နောက်အခန်းတစ်ခန်းရှိအသံများ၊ အပူချိန်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဖုန်မှုန့်များသို့မဟုတ်ဝတ်မှုန်အမှုန်များ၊ စိုထိုင်းဆနှင့်အလင်းရောင်များအားလုံးကိုညအချိန်တွင်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်နံနက်ယံ၌သင်အချို့နှင့်နိုးထလျှင် ၎င်း၏နှစ်ခု modes များ (ပုံမှန်သို့မဟုတ် smart alarm alarm)၊ သင့်အိပ်စက်ခြင်းကိုအပြည့်အဝအစီရင်ခံသည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာအဘယ်ကြောင့်သင်သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်အိပ်ခဲ့ရသနည်း (ဥပမာ၊ X နာရီတွင်အလွန်လှုပ်ရှားသောအသံထွက်ပေါ်လာသည်သို့မဟုတ်) အဲဒီအချိန်မှာတောက်ပနေတဲ့အလင်းဟာအရမ်းမြင့်ပြီးမင်းနိုးလာတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ အခန်းထဲမှာအရမ်းပူနေတယ်၊ ​​အေးတယ်၊ စိုထိုင်းဆ၊ တောက်ပတယ်၊ ၀ ကနေ ၁၀၀ အထိရမှတ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘယ်လိုအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပိုနားလည်နိုင်ပါတယ်။
မယုံနိုင်စရာကောင်းတယ်လားကောင်းပြီ၊ Wi-Fi နှင့် Bluetooth နှင့်အတူပထမတစ်ခုကို၎င်းကို router နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ထမ်းများမှတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိပဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသော Hello ဆာဗာများသို့စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုလုံးဝလုံခြုံပြီးအမည်မသိသောနည်းလမ်းဖြင့်ပို့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနားထောင်နိုင်ဖို့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရမှတ်တွေ၊ အချိန်ဇယားတွေကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ဆာဗာတွေမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးဒေတာတွေကိုဘယ်နေရာမှာပဲငါတို့စမတ်ဖုန်းကိုပို့ပေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Sense အတွက် application မှာရှိတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေ၊ ဂရပ်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးတဲ့ iOS နဲ့ Android) ။
ဒုတိယ (Bluetooth) ကို Sense အတွက်အသုံးပြုသောပရိုတိုကော၏ကျေးဇူးကြောင့်နာရီဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် (အစားထိုးနိုင်သည်) သေးငယ်သော Sleep Pill အာရုံခံကိရိယာနှင့်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ပရွက်ဆိတ် စွမ်းအင်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမရှိဘဲအသိနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် Sense with Life သည် ပိုမို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီးညအချိန်တွင်မီးပိတ်ထားသည့်အခါ Sense သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောအရောင်များကိုလင်းစေလိမ့်မည် (အကယ်၍ သင်ကောင်းမွန်စွာအိပ်နိုင်လျှင်အစိမ်းရောင်၊ သင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့်အနီရောင်အပြည့်အစုံရှိပါကအဝါရောင်) ရောင်လာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်စွာမအိပ်နိုင်လျှင်အနည်းငယ်သောအရာများကိုပြုပြင်မထားပါက Sense သည်အစိမ်းရောင်ထွန်းညှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်သည်။ ညတွင် Sense နှင့် Sleep Pill တို့သည်သင့်အားအနည်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုင်းတာရန်နှင့်မည်သည့်အရာများကိုရှာဖွေရန်အားစုစည်းလိမ့်မည်။ သင်၏အခန်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုနှင့်မဆိုသင့်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုသတိပြုပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ရောက်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက် (သင်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်နှင့်နိုးရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့်ပေါင်းစပ်မှု၊ အမြင့်ဆုံးသောအချိန်ထက် ကျော်လွန်၍ မည်သည့်အခါမျှမကျော်လွှားနိုင်သောအချိန်ကာလ၊ နှိုးစက်နာရီပေါ်တွင်သင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်အကြားပေါင်းစပ်မှု) Sense သည်ချောမွေ့စွာကစားနိုင်ပြီး ၎င်းသည်စွမ်းအင်နှင့်နူးညံ့သောနည်းလမ်း (အိပ်စက်ခြင်းအဆင့်တွင်အိပ်ရာဝင်ချိန်တွင်) ကိုနိုးထစေပြီးသင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဖြူရောင်ပန်းရောင်အလင်းဖြင့်ထွန်းလင်းပေးမည်၊ ရုတ်တရက်မနှိုးဘဲမပင်ပန်းစေဘဲ ၄ င်း၏ကြိုတင်တင်ထားထားသည့်တန်ချိန်များစွာအနက်တစ်ခုသို့တက်ခြင်း (အိပ်ပျော်နေစဉ်) သင်လုပ်ရန်အားလုံးသည်သင်၏လက်ကို Sense (ထိစရာမလိုဘဲ) ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားအချက်ပြမှုကိုရပ်တန့်စေလိုကြောင်းသတိပြုပါလိမ့်မည်။ သင်အိပ်ခဲ့ပုံကိုသိလိုပါကလျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်နှင့်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းအကြောင်းပါ ၀ င်သောအစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ (အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ဝတ်မှုန်၊ တောက်ပမှုနှင့်ဆူညံသံ၊ မီးများကိုသင်ပိတ်လိုက်သည့်အချိန်၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်၊ သင်အိပ်ပျော်သွားပြီ၊ ညမှာအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်များ၊ သင်ရွေ့လျားနေသည့်နာရီများ၊ ညအချိန်တွင်သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအချက်များ၊ နှိုးစက်နာရီမြည်သံ၊ သင်နိုးထချိန်၊ အိပ်ရာထချိန်နှင့် ၀ မှ ၀ မှ ၁၀၀ အထိရမှတ်များ သင်၏အိပ်စက်ခြင်း) ဒေတာများစွာရှိသည်ကိုသင်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်ညတည်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ကျလျှင်အိပ်သွားမည်ဆိုပါကကျန်သုံးစွဲသူများ (အမည်ဝှက်စွာဖြင့်အမြဲတမ်း) ထက်ပိုသောရွေ့လျားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းသည်ပျမ်းမျှအပူထက်သို့မဟုတ်အအေးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အခန်းတွင်အလင်းသို့မဟုတ်ဆူညံမှုများစွာရှိပြီးအခန်း၏အလင်းရောင်သို့မဟုတ်ဆူညံမှုများစွာရှိပါက၊ မည်သည့်သီတင်းပတ်၏နေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်သည်၊ မည်သည့်နေ့တွင်ပိုမိုအိပ်စက်သည်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ )
ထိုမှမပြီးသေးပါ၊ Hello မှသူတို့သည် Sense အား software ဖြင့်တိုးတက်စေရန်အစီအစဉ်များရှိသည် (ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများပေါ်တွင် data processing ပြုလုပ်စဉ်ကတည်းက update မလိုအပ်ပါ) ကျွန်ုပ်အားအတည်ပြုပြီးသင်၏ snoring ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးနားထောင်နိုင်ခြင်း , များအတွက်ထောက်ခံမှုထည့်သွင်း HomeKit y IFTTT, နှင့်ငါတို့ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲနေသောဤနာရီကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို။
Sense ကတိက ၀ တ်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင့်ကိုမယုံလျှင်၊ ငါနှင့်ပတ်သက်သောစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များနှင့်၎င်းနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာများကိုပြသရန်ဆန်းစစ်ရန်ငါစီစဉ်ထားပြီးတစ်ပတ်စောင့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » နေအိမ်အလိုအလျောက် » Sense, နှိုးစက်နာရီ၏ရှငျဘုရငျ
အလွန်ကောင်းတဲ့အလှူငွေ။ ဒီအကြောင်းကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
Package Tracker: Terminal တွင်တပ်ဆင်ထားသော Android application များ၏သမိုင်းကိုကြည့်ပါ
Nero 2015 Platinum ၏လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုယူသည်